သူတို့ကဒါဝိဒ်၏သားတော်ယေရှုဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသနည်း။ Online Online️အွန်လိုင်းကိုရှာဖွေပါ
သူတို့ကဒါဝိဒ်၏သားတော်ယေရှုဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသနည်း။ ခရစ်ယာန်များစွာမေးသောမေးခွန်းသည်ဒါဝိဒ်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ နီးပါးမွေးဖွားသောယေရှုအားသူ၏သားအဖြစ်ကြေငြာခြင်းဖြစ်သည်။ လူများစွာအတွက်၎င်းသည်နားလည်ရခက်သောအရာဖြစ်သည် အကြောင်းအရင်းအမှန်ကိုသမ္မာကျမ်းစာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်မရ။ သင်ရှာနေသောအဖြေကိုအောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ပါ။
2 "ဒါဝိဒ်၏သားတော်" ဟူသောခေါင်းစဉ်သည်မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။
3 သား (သို့) ဒါဝိဒ်သခင်လား။
ယေရှုသည်ဒါဝိဒ်၏သားဟုခေါ်ခြင်းခံရသည် ဒါဝိဒ်၏မျိုးရိုး ဒါဝိဒ်၏ကတိတော်ကိုအမွေခံရ၏။ ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်သော်လည်းသူသည်လူဖြစ်လာသည်။ လူသားတစ် ဦး အနေနှင့်သူသည်ဘုရင်ဒါဝိဒ်၏သားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရောမ ၁: ၁-၂
ဒါဝိဒ်သည်ယေရှုမတိုင်မီနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ လူတို့သည်ယေရှုကို“ ဒါဝိဒ်၏သား” ဟုခေါ်သည့်အခါ၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။မျိုးဆက်«။ ယေရှု၏ဖခင်ယောသပ်ကိုအဓိပ္ပာယ်တူသည့်ဒါဝိဒ်၏သားဟုလည်းခေါ်ကြသည်။
"ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်းအိပ်မက်ထဲမှာသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ပေါ်လာပြီး" ဒါဝိဒ်ရဲ့သားယောသပ်၊ မင်းရဲ့မယားမာရိကိုလက်ခံဖို့မကြောက်ပါနဲ့၊ သူမမှာဖြစ်တည်လာတဲ့အရာကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပါ။ "
ထို့ကြောင့်ဤသဘောတရားကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုစကားလုံးကိုနားလည်ရမည် "သား"လက်ရှိအဓိပ္ပါယ်ထက်ပိုအဓိပ္ပါယ်ရှိခဲ့သည်။ ငါဆိုလိုတာက၊ "သားစဉ်မြေးဆက်" ဟုနားလည်နိုင်သည်။
ဒါဝိဒ်၏သားတော်သည်မေရှိယ၊ ဂျူးလူမျိုးများမျှော်လင့်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတစ်လျှောက်တွင်ဘုရားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သောကတိတော်များအရဂျူးများသည်ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသိသည်။
ဂျူး ဘုရား အာဗြဟံကိုကတိပေးတယ်သူတို့၏မျိုးရိုးအားဖြင့်သူသည်ဂျူးလူမျိုးအားလုံး၏ဘိုးဘေးဖြစ်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူမျိုးအားလုံးကောင်းချီးခံစားရလိမ့်မည်; ဤကတိကိုသား ac ဇာက်နှင့်သူ၏မြေးယာကုပ်တို့အားပေးခဲ့သည်။
“ ငါမင်းကိုလူမျိုးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်၊ မင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်၊ မင်းနာမည်ကိုကြီးကျယ်အောင်လုပ်မယ်၊ မင်းကောင်းချီးပေးပါလိမ့်မယ်။ မင်းကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူတွေကိုငါကောင်းချီးပေးပါလိမ့်မယ်၊ မင်းကိုကျိန်ဆဲတဲ့သူတွေကိုငါကျိန်ဆဲမယ်။ မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောမိသားစုအပေါင်းတို့သည်သင်၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်။ (ကမ္ဘာ ဦး ၁၂: ၂-၃) ။
ယုဒအနွယ်မှယာကုပ်ကဤသို့ပရောဖက်ပြုခဲ့သည် ယုဒအနွယ်သည်အုပ်စိုးလိမ့်မည် otherသရေလအမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်းတို့ထက်၊
ရှိလောမြို့မရောက်မှီတိုင်အောင်ယုဒ၏ရာဇလှံတံကိုမပယ်ရ။ ပြီးတော့သူ့ကိုလူတွေစုဝေးစေလိမ့်မယ် "ကမ္ဘာ ဦး ၄၉:၁၀).
«ငါရွေးချယ်သောသူနှင့်ပဋိညာဉ်ပြု၏။ ငါ၏ကျွန်ဒါဝိဒ်အားငါကျိန် ဆို၍၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်ကိုအစဉ်အမြဲတည်စေမည်။ တိ့ု» (ဆာလံ ၈၉: ၃-၄) ။
တိုက်ရိုက်သားစဉ်မြေးဆက်တစ် ဦး အနေနှင့်လူသား၏သဘောအရ၊ ဒါဝိဒ်၏ မေရှိယဖြစ်ရန်လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုယေရှုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်မရ။ ဒါဝိဒ်၏သားတော်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်သခင်ယေရှုသည်ထိုကတိတော်များကိုအမွေခံသူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန်အရေးကြီးသည်၊ လူတိုင်းစောင့်မျှော်နေသောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်။
"လူအပေါင်းတို့သည်အံ့, ။ ၊ ဤသူသည်ဒါဝိဒ်၏သားတော်ဖြစ်နိုင်သလော။ "
သား (သို့) ဒါဝိဒ်သခင်လား။
ယေရှုကဘာလဲ၊ ဒါဝိဒ်၏သား၊ သခင်
ယေရှုသည်ဖာရိရှဲများအားစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးကယ်တင်ရှင်သည်ဒါဝိဒ်၏သားတော်နှင့်သူ၏သခင်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ပရောဖက်ပြုချက်များကသူသည်ဒါဝိဒ်၏သားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသော်လည်းမေရှိယသည်သခင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဒေးဗစ်လည်းကြိုပြောခဲ့သည်။ သားကသူ့အဖေကိုအခွင့်အာဏာမရှိတာမို့ဒါဝိဒ်ကသူ့သားရဲ့ကျွန်ဖြစ်နိုင်တာဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
“ ဖာရိရှဲတို့အတူတကွရှိနေသောအခါယေရှုက“ ခရစ်တော်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။ သူ့အဖေကဘယ်သူလဲ။
သို့ဖြစ်လျှင်ဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင် ဟူ၍ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်း။
ဖာရိရှဲများကသူတို့ကအမှန်တရားရှိသည်ဟုထင်သောကြောင့်ယေရှုကဤမေးခွန်းကိုမေးခဲ့သော်လည်းသူသည်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်ကိုလက်မခံချင်ပေ။ ယေရှုကသူတို့ကအရာအားလုံးကိုမသိကြောင်းပြခဲ့တယ်။ ပုစ္ဆာရဲ့အဖြေကဒါပဲ ယေရှုသည်လူသားများအနေနှင့်ဒါဝိဒ်မှဆင်းသက်ခဲ့သည်မရ။ ယေရှုသည်လည်းဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောကြောင့်ဒါဝိဒ်မမွေးဖွားမီနှင့်သူ့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူသည်။
ဒါကဖြစ်ခဲ့တယ်! ဒီဆောင်းပါးကသင့်အကြောင်းပြချက်ကိုနားလည်ဖို့ကူညီပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဒါဝိဒ်၏သားတော်ယေရှုဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသနည်း။ သငျသညျယခုသင်ယူဖို့လိုလျှင် ဘုရားသခင်နှင့်သင်၏ရင်းနှီးမှုကိုမည်သို့တိုးပွားစေပုံကိုအဆင့် ၅ ဆင့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြသည်.
အဆင့် ၅ ဆင့်တွင်ဘုရားသခင်နှင့်သင်၏ရင်းနှီးမှုကိုမည်သို့တိုးပွားစေသနည်း